China Plastic prototype Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Dhizaini & Prototypes
Zvezvigadzirwa zvepurasitiki zvinoda kugadzirwa kweforoma, isu tinowanzoita zvemuviri epurasitiki kumumvurikuongorora kugadzirwa kwayo. Inoreva imwe kana akati wandei unoshanda modhi iyo inogadzirwa zvinoenderana neyakagadzirwa dhizaini dhizaini kana dhizaini dhizaini pasina kuvhura fomu kuti utarise huchokwadi hwechitarisiko kana chimiro. Plastic prototype munzvimbo dzakasiyana inozivikanwa seyeyeye epurasitiki, modhi, mackup.
Ipurasitiki prototype inzira yakakosha yekuongorora dhizaini yechigadzirwa uye kuratidza zvigadzirwa. Iyo yakavakirwa pane chigadzirwa dhizaini dhizaini, uchishandisa muchina chishandiso kugadzirisa kana resin laser kurapa kana kubatanidza maitiro kugadzira masampuli ekuongorora dhizaini uye kuratidza. Kana isu tichigadzira chigadzirwa chitsva, masampuli anowanzoitwa zvinoenderana nechitarisiko chechigadzirwa kana dhizaini dhizaini kutarisa kutaridzika kana chimiro kurongeka kwema templates anoshanda. Kugadzira prototype ndiyo imwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekuongorora dhizaini yechigadzirwa uye kudzikisa njodzi yekugadzira.
Nechinangwa chekupa nzira inoshanda kwazvo yekugadzira yako prototype uye chishandiso, mainjiniya edu ekugadzira ari pano kuti akupe dhizaini yekugadzira sevhisi kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa (zvako) zvinogara zvichikodzera kugadzirwa kwepurasitiki. Kuburikidza nekuongorora kwakadzama uye kusarudzwa kwezvinhu zvakasarudzika, tinogona kusimbisa kuvimba kweprojekiti yako uye nekupa yekukurumidza prototyping sevhisi kurumbidza dhizaini- izvi zvinopa mikana yakawanda yekuyedza mashandiro ayo anozoburitsa chero shanduko dzinogona kugadzirwa kune dhizaini kuti zvinyatsoenderana nezvinodiwa pamusika wako. Izvi zvinoona kuti zvigadzirwa zvigadzirwa zvakagadzirwa hazvipinde mune inotevera nhanho yekugadzirwa kweforoma, kudzivirira kunonoka kukundikana uye kuraswa kwakakura kwemutengo. Zvezvigadzirwa zvemaindasitiri zvakakura, kungave kwakaomarara zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, mota, zvekurapa, mabhurosi emazino, makapu emvura uye zvimwe zvidiki zvezuva nezuva, mune chigadzirwa dhizaini, muenzaniso wekuenzanisira unofanirwa kuitwa kuongorora nekuongorora kugona kwehunyanzvi, hunyanzvi uye musika zvinhu, uye kugara kuvandudza Optimization magadzirirwo. Wana mhinduro dzakanakisisa.
Mhando uye mashandisiro epurasitiki prototypes
1. Chitarisiko prototype: Pakutanga kwechigadzirwa chitsva dhizaini, ita kuti chimiro chiratidzike kuti chiongorore uye nekuvandudza maratidziro echitarisiko chechigadzirwa, uye sarudza chinonzwisisika uye chinoratidzika chitarisiko chevatengi.
2. Structural prototype:Mushure mekugadzirwa kwechigadzirwa kwapera, kazhinji prototype inoitwa zvinoenderana neyakaumbwa dhizaini pamberi peiyo fekitori yekugadzira. Mugadziri anotarisa chimiro dhizaini prototype kuti awane chakakanganisika mukugadzira zvisati zvaitika, uye kugadzirisa uye kugadzirisa dhizaini, kuitira kudzivirira njodzi mukugadzira.
3. Inoshanda prototype: Mukupindura kwevatengi zvinodiwa kana mushambadziro wekusimudzira zvido, iyo prototype inotangiswa-kuratidzwa kumusika uye vatengi vasati vagadzirwa chakuvhe kana chakuvhuvhu chisati chapera.
Chitarisiko / Structural prototype
Pane hunyanzvi hukuru hukuru hwekugadzira epurasitiki prototypes seinotevera
Cnc machine epurasitiki prototypes
1.Muchina:Iyo prototype inonyanya kugadzirwa nenzvimbo yekucheka. Ichitaura nezve dhizaini dhizaini yezvigadzirwa, izvo zvinhu zvisingawanzo kubviswa kubva kune yakasimba plastiki isina chinhu nekucheka chishandiso pane yekucheka muchina chishandiso, uye zvikamu zvinoenderana nehukuru uye chimiro zvinowanikwa. Mushure mekugadziriswa kweCCC, kumwe kugadzirwa kwebhuku kunowanzodiwa.
--- Chakanakira: zvikamu zvinogona kuitwa zvezvinhu zvakasiyana siyana zvichienderana nezvinodiwa; zvikamu zvakagadzirwa zvine mutsindo wakanaka, simba uye hapana kukanganisa; nyore kuwana zviri nani pamusoro pehunhu, nyore kupenda, electroplating uye kudhinda kwechidzitiro. Inokodzera masampuli ane gungano rinoenderana, zvinofamba zvikamu, zvikamu zvikuru, zvikamu zvine chitarisiko chekushongedza, uye anoshanda michina. Nguva yekuendesa ndeye mazuva 7-8. Iyo yakakodzera kugadzira chitarisiko prototype, inoshanda prototype uye yakaumbwa prototype.
--- Zvinhu: ABS, PC, POM, PMMA, nylon, nezvimwe.
--- Kukanganisika: Iko kusakosha ndiko kudiwa kweimwe huwandu hwekugadziriswa kwemaoko, kudhura. Izvo zvakanyanya kuomesa chimiro, iko kunowedzera mutengo.
2. SLAkana stereolithography Prototyping - SLA tekinoroji inosimbisa imwechete imwechete ne laser scanning exposure. Kuburikidza neiyo ultraviolet laser danda, zvinoenderana nechikamu chakagadzirwa chemuchinjikwa wepakutanga rukoko, kurapa poindi nepfungwa, kubva poindi kuenda kumutsara, kubva pamutsara kuenda kumusoro, kuburikidza nekufambisa kwekusimudza chikuva, kudhinda-mativi matatu kunopedzwa nekurongedza rukoko netaundi . Iyo prototype yakabviswa kubva mutangi uye yakasimbiswa pasi peiyo ultraviolet mwenje. Zvichienderana nekunetsekana, zuva rekutakura rinogona kupfupika semazuva 2-3.
SLA epurasitiki prototypes
3. SLSkana kusarudza laser sintering. Izvi zvinosanganisira kuvaka zvikamu kubva ku3D data uchishandisa resin powders uye lasers. Yakafananidzwa jekiseni giredhi inogona kushandiswa kupa kumwe kuita, kusanganisira "chinofamba hinji" zvikamu. Dhirivhari zuva rinogona kunge riri mazuva 2-3, zvinoenderana nekunetseka. Munguva yekutsvukisa kweSLS, tembiricha yeupfu zvinhu (kana bhainda yayo) yangosvika panonyungudika, uye haigone kuyerera zvakanaka uye kuzadza mukaha uripo pakati pehupfu. Naizvozvo, pamusoro pechikamu chakasununguka uye chakaomarara.
--- Makomborero: Simba rakanaka, kwete nyore kuumbika, kusagadzikana kwesimba, inogona kumira uremu uye imwe huwandu hwekugadzira. Nyore kusunga. Ngura nemishonga. Iyo inokodzera kugadzira chimiro chechimiro.
--- Chinyorwa: Uchishandisa nylon poda, polycarbonate poda, acrylic polymer poda, polyethylene poda, nylon poda yakasanganiswa ne50% girazi marozari, elastomer polymer poda, zvedongo kana simbi uye bhainda poda uye zvimwe zvinhu, kuita kwekuenzanisa.
--- Zvakaipira: murombo ndeiya yakaita kukodzera uye pamusoro pemhando. Inoshandiswa kune yakasarudzika prototype iyo yepamusoro kutaridzika mhando isingadiwe.
4. Vacuum prototype(Vacuum Kuzadza) Kubhururuka kuburitsa inzira yekugadzira madiki batch mhando. Iyo inoshandisa iyo yekutanga prototype (CNC prototype kana SLA prototype) kugadzira silica gel muforoma muvharusi, uye inoshandisa PU zvinhu kudururira muvhavha, kuitira kuti ifanane nemufananidzo mumwechete neyeiyo yekutanga prototype, iyo ine nani kupisa kuramba, simba uye kuomarara kupfuura iyo yekutanga prototype. Kana vatengi vachida akati wandei kana gumi nemaviri seti, yakakodzera kushandisa nzira iyi, iyo inoderedza zvakanyanya mutengo.。 Zvishandiso zvinogona kupa akasiyana ekufananidza zvinhu kuti uwane zvimwe zvezvinhu zvejekiseni zvikamu zvekuumba. Dhirivhari zuva rinogona kunge riri mazuva 7-10, zvinoenderana nekunetseka.
--- Bhenefiti: Izvo zvinodikanwa kushandisa CNC kana SLA maitiro ekugadzira yekutanga sampuro, inoenderana nematanho akati wandei kune akawanda seti emabhureki madiki esampuli. Saizi kudzikama, simba uye kuomarara zvakakwirira kupfuura SLA prototype, padhuze neCCC prototype. Iyo yakakodzera kugadzira chitarisiko prototype. Inoshanda prototype uye chimiro chechimiro.
--- Chinyorwa: PU resin inowanzo shandiswa, asi zvakare inogona kupa akasiyana ekufananidza zvinhu.
--- Kukanganisa: Haikodzeri zvikamu zvine chimiro chakaomarara. Mutengo wacho wakaderera pane uya weCNC samples.
5. RIM (Reaction jekiseni Kuumbwa) zvakare kushandiswa kwepakutanga prototype (CNC prototype kana SLA prototype) yakagadzirwa nesilika gel chakuvhuvhu, iyo mvura mbiri-chikamu polyurethane PU inojowa mukati mechimbi chimbi nekupisa kwemukati uye yakaderera kumanikidza nharaunda, kurapa uye kutumira -kugadzira kuti uwane iwo anodikanwa epurasitiki sampuli.
--- Zvakanakira: Iyo inoshandiswa kune diki batch kudzokorora kwemapusa akareruka uye mahombe uye kugadzirwa kwemahombe makobvu-akakomberedzwa uye asiri-yunifomu emadziro ukobvu zvigadzirwa. Iyo ine zvakanakira kushanda kwakanyanya, ipfupi yekugadzira kutenderera, yakapusa maitiro uye yakaderera mutengo .- - Chinyorwa: Maviri-echinhu polyurethane PU.
--- Kukanganisa: Zvishandiso zvinoshandiswa hazvina kuroorwa.
Mufanikiso pamusoro kurapwa: makorari, kupenda, sirika kudhinda, gilding, electroplating.
Imwe neimwe inokurumidza prototyping maitiro anogona kupa akasiyana epashure-chakuvhuvhu apedza uye ekupenda matekiniki, kuitira kuti ugadzire nyanzvi kutaridzika. Padanho rino, mainjiniya edu anogona kukurudzira zvimwe zvinokurumidza prototyping zvishandiso zvekushandisa kuti vawane chinonyanya kunakidza uye chinoshanda chigadzirwa. Seimwe-yekumira sevhisi, isu tinokupa iwe akateedzana masevhisi, senge chigadzirwa dhizaini, prototyping, chakuvhuvhu kugadzira uye jekiseni kuumbwa, machine, uye chigadzirwa gungano. Ndiro rimwe remabasa ekukupa iwe nemuenzaniso masampula epurasitiki nesimbi zvikamu. Muchigadzirwa chako chekuvandudza, nerubatsiro ruzere, tinogona kuona kuti zvigadzirwa zvako zvinopinda mumusika nenzira inoshanda uye isingadhuri.
Prototype ongororo chikamu chakakosha chechigadzirwa dhizaini. Mestech zvakare inopa chigadzirwa dhizaini, chakuvhuvhu tooling, epurasitiki jekiseni kuumbwa uye chigadzirwa chigadzirwa masevhisi kuenderera kutsigira yako yekugadzira maitiro.
Pashure: Metal 3D kudhinda
Zvadaro: Kufa kukanda maitiro
3d Kudhinda Plastiki Prototype
Plastic kumumvuri Kugadzira
Mota yePurasitiki Zvikamu
Metal 3D kudhinda